Bangiga adduunka oo sheegay inuu cagta saaray dhabbihii 30 sano kadib lagusoo celin lahaa xidhiidkii Soomaaliya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Bangiga adduunka oo sheegay inuu cagta saaray dhabbihii 30 sano kadib lagusoo...
Bangiga adduunka oo sheegay inuu cagta saaray dhabbihii 30 sano kadib lagusoo celin lahaa xidhiidkii Soomaaliya
Golaha Fulinta ee Bangiga Adduunka ayaa maanta u dhaqaaqay sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirkii ay la lahaayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya (FGS) soddon sano kadib. Tani waxay fursad u siineysaa Soomaaliya inay ka hesho maalgalin lacageed oo laga helo Ururka Horumarinta Caalamiga ah ee Bankiga Adduunka (IDA) iyo inay si dhow ula shaqeyso dhammaan kooxda Bankiga Adduunka si loo soo jiito maalgashiga taageeraya xasilloonida iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Axel van Trotsenburg, Madaxa Maareynta Bangiga Adduunka ee Howlgallada ayaa yidhi, “Talaabadani waa natiijada sanado badan oo ah wadashaqeyn dhow oo aan la leennahay Dowladda Federaalka, waxaan hadda sugeynaa inaan xiriirkayaga u gaarno heerka xiga oo aan ka helno taageero qoto dheer iyo mid ballaaran oo dhinaca farsamada ah iyo taageero farsamo oo laga helo guud ahaan Bangiga.”
“Soomaaliya waxay sameysay dib-u-habayn muhiim ah waxayna muujisay go’aan adag oo ku aadan sii wadista wadadan,” ayuu yiri Hafez Ghanem, Madaxweyne ku xigeenka Afrika, Bangiga Adduunka.
Bangiga adduunku wuxuu sheegay, isbadalladaan inay aasaas u yihiin yareynta joogtada ah ee dhimista saboolnimada iyo nolol wanaagsan oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed, waxayna albaab u fureysaa maalgashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay oo abuuri kara shaqooyin hormarinaya dhaqaalaha.
Dib-u-habeynta Soomaaliya ayaa sii wadaysa xoojinta awoodda dowladda ee ah in ay siiso adeegyo aad loogu baahan yahay xagga caafimaadka iyo waxbarashada dadka Soomaaliyeed, iyo in la dhiso qaab dhismeedka ganacsiga gaarka loo leeyahay ee abuuri kara shaqooyin gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dowladda federaalka ayaa fududeysey wada-tashiyada ku saabsan Qorshaha Horumarinta Qaranka, iyadoo ka warbixineysa mudnaanaha dalka si maalgashi looga sameyn karo meelaha ugu daran.
“Maanta waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dib-ula-hawlgalka buuxa ee Kooxda Bangiga Adduunka ee Soomaaliya,” ayuu yiri H.E.M. C / raxmaan Ducaale Beileh, Wasiirka Maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku daray hadaliisa,” Waxaan uga mahadnaqaynaa Bangiga taageeradii ay horay u siisay inay ka caawiyaan dalka inuu gaaro halkaan waxaanan rajeyneynaa inaan qorsheynno waji cusub oo maalgashi ah si aan u gaarsiino himilooyinka dhimista saboolnimada ee Qorshaha Horumarinta Qaranka.”
Go’aanka maanta ay gaareen Golaha Bangiga Aduunka ee kooxda Fulinta ayaa dhigaya asaaska Soomaaliya inay marin u hesho maalgalinta loogu talagalay mashaariicda dawladda dhexe iyo tan dawlad-goboleedyada ee hoos imanaya Ururka Horumarinta Caalamiga (IDA).
Previous articleGovernment confirms 35 more Coronavirus cases
Next articleCoronavirus: Why are Africans in China being targeted?